Vinnitsa - Study muUkraine. Ukrainian Munopinda Center
Vinnitsa ndiye musimboti Vinnitsa nharaunda, guta rine vapfumi tsika uye nhoroondo, iri pamharadzano upfumi, mumagariro, geopolitical meridians rweUkraine. Guta riri pamahombekombe erwizi Southern Bug, 260 Kms kumaodzanyemba Kiev, guta guru reUkraine (4 maawa nechitima), 14 maawa nechitima kubva kuMoscow uye 6 – kubva Odessa.
Guta kwakabatana nokuda njanji uye mhepo makwara kuti kumadokero kweEurope uye dzimwe nyika. Avhareji tembiricha munguva yechando -5 -7 °, chirimo – +20 +27° C. Vinnitsa anozivikanwa sezvo vadzidzi 'guta muUkraine, zviri vanodada nemasangano hunoshamisa kudaro dzidzo sezvo: Vinnitsa Technical University, Pedagogical University, Trade Economic University, Agricultural University nezvimwewo.
Vinnitsa mamiriro rakaumbwa musi February 27, 1932. It Ane nharaunda 26500 km2 (4,5 % wenharaunda muUkraine). The Vagari ehurumende kunoita 1,815,000 , kusanganisira Urban vokuparidzira - 882,000. Vinnitsa mamiriro riri musango-inowanzorimwa mapazi mukati muganhu Podolsk zvikomo. Kune kusvika 204 nzizi mukati nehurumende, mumwe kupfuura 10 kms pakureba, uye huru mbiri ndivo vari Southern Bug uye Dniester. Vinnitsa ane mwero Continental okunze pamwe yechando nounyoro uye kwoushamwari zhizha nyorovera. Five mumayunivhesiti, 453 zvokurapa establishments, 31 utano-plesieroorde ishande ikoko. Theatres – 2, cinémas, nemagariro nzvimbo, makirabhu – 1256. Monuments nhoroondo uye tsika nemagariro – 3144, mamiziyamu – 20. The miziyamu enyika akakurumbira chiremba N.I. Pirogov kwakakurumbira chaizvo, muviri wake unoomeswa uye wakachengetwa wamarinda penzvimbo pedyo miziyamu.
The guta ndohwaJehovha chinonyanya kukwezva inivhesitimendi kumatunhu nokuda simba maindasitiri uye zvikuru yesayenzi zvinogona, dzakasimukira senga samambure, mumwe rwezvemabhengi hurongwa, ari yakanaka enterprising okunze.